Indlela Qeqesha Izikhangibavakashi As A Nomad Through Europe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Indlela Qeqesha Izikhangibavakashi As A Nomad Through Europe
Uma isihambi solo futhi ungathanda ukuqeqesha travel njengoba Nomad, ke uku endaweni efanele. Izincwajana zemininingwane wokujikeleza ingenye yezindlela ezingcono kakhulu zokwenza udabula Europe uma ufuna ukuzwa konke Europe oluyohlala. Yiba ke imizi, noma emangalisa namathafa zemvelo ungakwazi ukujabulela konke nge ehamba ngesitimela.
Yini enye, ehamba ngesitimela njengoba Nomad has eziningi ezinye izinzuzo. Uthola ukuzwa konke isikhathi sakho, kanye izitimela ukukunikeza kungenzeka ukukwenza ngokushelela futhi ngaphandle kalula. Kungase kube kancane ngezikhathi ezithile, kodwa akukho ukucindezeleka kule modi ikhambo, kuyilapho izindiza kukhona okuhluke ngokuphelele uma. Uma uhamba ngendiza, kukhona ukucindezeleka njalo Ukugcwala ngokweqile zezindiza kanye izinyathelo overzealous yezokuphepha. Yini enye, kwezinye izimo, uzothola endaweni oya kuyo ngokushesha uma uthatha isitimela!
Ngenxa yalezi nezinye izizathu eziningi, ehamba ngesitimela ngokuthanda kwakho into engcono ongayenza. Uma ufuna ukuqala lokhu adventure imilingo ayimizulane, lesi sihloko kuzokusiza ngokukunika iseluleko namathiphu okuthi ungawusebenzisa kanjani ukukwenza kahle.
Izinto Main ukuba Cabanga Lapho Ufuna Qeqesha Izikhangibavakashi njengoba Nomad
Ngaphambi kokuba uqale zemininingwane lakho lohambo njengoba adventure Nomad, kufanele ube intando ukukwenza, futhi kufanele ube imali.
Uma ufuna ukuba zulazulani isitimela ngezebhizinisi, wena angeke babe nezinkinga uma ukusebenza njengoba ngezokuvakasha noma ekhaya lakho. Noma yimuphi umsebenzi ongakwenza kukhompyutha yakho, ungakwenza kunoma iyiphi indawo.
Uma u funa ukuthatha ikhefu kusuka ekusebenzeni kanjalo ukuya eholidini, uzodinga imali yakho ngokuhlakanipha. Into enhle kukhona ezinye izixazululo ukusiza.
Yazi ukuthi uma travel ngesitimela 30days noma ezingaphezu kwezingu ukhethe pass Interrail global. Kodwa amathikithi Single ithuba ukuhamba engxenyeni enkulu yeYurophu at esivumelana nawe, okwenza kube iphupho Nomad sika. Uthola ukuya nini futhi kuphi ufuna, nokuthi indlela engcono ukudala wokujikeleza engavamile.
Kungakhathaliseki olukhethayo isitimela ikhambo lakho, you can still wonge imali ngale ndlela.
Ungayonga Kanjani Imali Lapho Uqeqesha Ukuhamba NjengoNomad
Into enhle mayelana lolu hlobo isipiliyoni wukuthi uzoba abazalwa imali engaphansi. Ngalokhu, sisho ukuthi lapho uqeqesha travel njengoba Nomad, uzothola okuhlangenwe nakho okungcono uma uhlale amahostela ezishibhile, ukupheka yakho ukudla, futhi nokuningi.
Ukukhetha kule modi ikhambo imali.
imali Iningi wachitha lapho zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba Nomad iya ekamelweni ukubhuka. Nokho, uma ukubhuka amahostela, ungagcina imali eningi njengoba siphelela kakhulu ethengekayo kuka amahhotela futhi ngesipiliyoni kangcono futhi ongasoze ngaphezulu. Yini enye, uma uhamba wedwa, ongawabhuka iliphi igumbi nabantu abaningi kulo, okungukufa inketho eshibhe. Futhi usithemba, uzokufuna lokhu ngoba lokhu kuzokuvumela ukuthi uhlanganyele nabanye abahambi abanomqondo ofanayo.
Ngokolunye uhlangothi, uma ufuna ukuhlangabezana bendawo, kufanele usebenzise Couchsurfing, ngoba ngale ndlela uzothola ukuhlala nge bendawo. plus, bangakwazi bakutshele okwengeziwe lomuzi wakubo ukukubonisa zonke izindawo fun kuwufanele ngokuvakashela.
Into elandelayo sekuqede ukonga wakho, kahle, yokudla. Ungagcina imali ku ukudla ngokulungiselela ukudla yakho ehostela noma ezindlini. Amahostela amaningi namafulethi anikela ngamakhishi ongawasebenzisa mahhala. Yini enye, elinye ithuba le Ihostela iwukuba hang out nabantu futhi ulungiselele ezinye ukudla ukwabelana.
Izincwajana zemininingwane Travel kuyinto Nomad Amathiphu
Uma ungumuntu zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba uhlobo Nomad ka extrovert, ukuhlala amahostela uyinto uzoba simdumise njengoba kuba ngabantu abanjengawe.
Uma ungumuntu zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba uhlobo Nomad ka umnyewu, uzoba ukubeka e Ngomzamo omncane nje uma ufuna hang out nabanye. Into enhle izinsuku ukuthi ngemva ezimbalwa, uzoba usuyijwayele. ekugcineni, ozokuthanda ngendlela uthola ukuthi uhlanganyele nabanye ngesikhathi isihambi Nomad.
Awunayo ukusebenzisa surfing kusofa ukuze uhlale nge bendawo; ungakwazi futhi ulisebenzise ukuze uhlanganyele nabo. Uhlelo lokusebenza kungasetshenziswa ukuze usethe amabhara ne bendawo abathanda ukuthatha abezinye izizwe ku obubodwa.
Qaphela pickpockets! Njengoba kunjalo nge imuphi omunye umuzi emhlabeni, amadolobha aseYurophu babe pickpockets nezinye izigebengu abazama ukusizakala izivakashi. Udinga qaphela, futhi kufanele sifunde imibiko yokuhlaziywa kwaleyo isimo umkhuthuzi othile ngoba indawo oyivakashelayo. Ngaso sonke isikhathi ngenza ucwaningo inthanethi ngaphambi kokuvakashela idolobha.
Njalo sebenzisa izinhlelo zokusebenza zingenza impilo yakho ibe Nomad ukuhamba ngokunethezeka. Ukuze ulandelele izindleko zakho, Okuningi kwe Ama-app kungaba nabangane bakho umhlabeleli.
Khumbula ukukhanya travel. Uma kuzoba Nomad isitimela ukuhamba, uzoba isikhathi kulula kuphela ethwele yini edingekayo. Emahostela ukunikela eziningi Izinsiza ezibalulekile efana amathawula, abasebenza izinwele, nokunye okunjalo, ngakho ungenawo ukuletha eyakho. plus, ngokuvamile baba imishini yokuwasha kanye dryers ongazisebenzisa ukuze euro noma ezimbili, ngakho asikho isidingo sokuthi kube khona izingubo eziningi kakhulu nawe noma. Uma ufuna ukuhamba nge izinto eziningi, ojosaka kungase kube isinqumo esihle.
Sekukonke, isitimela sokuvakasha njengoba Nomad kuyinto enhle awahluphi. Ungavakashela ezindaweni eziningi kalula zonke emazweni omuhle njengenyanga France, Germany, Italy, futhi nokuningi. plus, uthola ukubona emaphandleni enhle kanye namathafa emangalisa ubunjalo oluyohlala. Ayikho enye ukukhetha travel izokunikela akusoze kwalibaleka futhi kumnandi ezifana.
Yenza enhle kakhulu zemininingwane Izikhangibavakashi njengoba Nomad uhlelo kusengaphambili kanye Thenga The Train Amathikithi Uyakudinga, uzobese setha ukuqala adventure yakho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit nge isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#traveleurope europeantravel europetravel amathiphu trainjourney Tranride izitimela ithiphu yesitimela amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha uhambo ngesitimela Izikhangibavakashi traveltips